Khariidadaha GPS ee Venezuela, Peru, Colombia iyo Central America - Geofumadas
Khariidadaha GPS ee Venezuela, Peru, Colombia iyo Central America
Juunyo, 2011 GPS / Qalabka, tabo cusub, safarka
Tani waa mashruuc iskaashi oo loogu talagalay abuurista iyo cusbooneysiinta khariidadaha loogu talagalay navigaliyeyaasha GPS. Waxa uu ku dhashay Venezuela laakiin wuxuu si tartiib tartiib ah u ballaariyay dalal kale oo Isbaanish ah marba marka codsiyada moobiilku ay noqdaan kuwo caan ah oo la heli karo internetka.
Waxaan jeclahay mid ka mid ah sheekooyinka lagu daabacay wargeyska Venezuela oo ku saabsan mashruucan, oo ku saabsan waxa ay ahayd sidii loo siin lahaa cinwaanka miyiga ka hor tiknoolajiyada dejinta. Tani waa nooc loo habeeyay:
Waxaad u socotaa wadada la jiido, waxaad u leexataa meesha uu jiro geed Quebracho ah oo u dhaw albaabka xiran ...
Mitirka 100 kasta waxaa ku yaala geed Quebracho ah, haddii aan isku xirno ... iyo sida haddii albaabka xadhigoodu yahay heer caadi ah.
Waxaad u socotaa gabbaldhac oo waxaad halkaas ka gudubtaa ...
Socdaalka, wareegga ... baasaboorka bartamaha Central waxaa lagu magacaabaa booth halkaasoo ay ka iibiyaan cabitaannada fudud iyo macmacaanka. A wareega UTM laba-degaanka waxaa lagu magacaabaa isgoyska waddooyinka dhowr ah. Darajooyinka 14 ee hoos ku qoran, waxay u yaqaanaan beertii ... iyo saliibku wuxuu u eg yahay inuu jarayo xididdadaada qarniyadii dhexe.
Kadibna, waxaad ku socotaa wadada cawska, inta u dhaxaysa laba jawaan oo baraf ah, iyo markaad gaari karto, waxaad qaadataa mid ka mid ah kuwa ku yaala dhinaca raadiyaha ...
Marka la eego, taasi waxay noqon doontaa, waa inay noqotaa sida chagüite ...
Markaas waxaad ku gudbi doontaa qayb ka mid ah geedo badan oo ...
Waxaad raacdaa, oo waa inaad ka taxadartaa inaad u leexatid halka ay jirto qaboojiye da 'waayeel ah.
Maalin maalmaha ka mid ah Guanacos ayaa soo gashay iyagoo ururinayay warshadaynta dib-u-warshadaynta taasina waa meesha saxda ah ee cinwaanka laga soo galey. Xitaa duqaarka ayaa codsi ka helay komishanka dalxiiska, si loogu dhigo qaboojiyaha xaalad xumo goobtaas si looga fogaado jahwareerka.
Maanta mareytka wax walba way isbeddeleen, kuwa laga isticmaalay gaariga sida codsiyada lagu soo gudbin karo telefoonka gacanta ama Ipad kiniini. Mashruucani wuxuu ka kooban yahay qayb weyn oo bulshada ka mid ah oo isticmaala noocyada hiwaayadaha iyo waqtiga ay qaadaan Garmin guddiga, iyo sidoo kale inaad ka hortagto dhibaatooyinka markaad u safraysid goobaha kulaalayaasha kulaaleed .
Waa inaad tagtaa gudaha, si aad u aragto waxkasta oo ay bulshadu wax ku biirisay, sababtoo ah waa inaad raadisaa khibradaha ku lug leh soo cusbooneysiinta qaybta moobiilka iyo khariidaduhu ma khuseeyaan nooc kasta. Laakiin waa in aan aqoonsannaa in hawlaha kuwan oo kale ah ay qiimo u leeyihiin qiimaha iskaashiga.
Waxaan ka tagaa faallooyinka qaar ka mid ah iyo fariimaha la xidhiidha ee mashruuca ka dhigaaya naftooda.
Tani waa magaca mashruuca Venezuela, oo ah waddan oo laga heli karo internetka moobaylka oo ka tagay hooseeyaha caadiga ah ee Isbaanishka. Ka bilaabashada 2003 wuxuu aad u sareeyaa marka la eego khariidadaha, qodobada xiisaha iyo xitaa macluumaadka wadada ee 4 4 iyo jidadka socodsiinta.
Si daacadnimo ah, Venrut waa mid ka mid ah khariidadaha GPS ee dunida ugu wanaagsan, iyo waxaan la barbar dhigay iyaga. Hambalyo si aad u heshid shaqo AAA ah.
Tani waa magaca mashruuca Peru, waa mid aad u horumarsan oo faahfaahsan. Jaaliyaddan wadankan sidoo kale waxay ka hawl gashaa arrimahan dabeecadda.
Dib u eegis kooban oo ku saabsan 3.10: Sidii ay horey u soo dhigtey, khariidadan gebi ahaanba waxay kufadhiyaan dameer.
Waa mid sax ah oo lagu kalsoon yahay khariidadaha Google. Oo waxaa la yaab leh inta jeer ee ay ka heli karto habka ugu wax ku oolka ah ee looga wada xaajoodi karo sida "labiska" sida "magaalada magaalo" ee Peru iyada oo aan loo eegin sida aad uga fog tahay bogga aad u maleyneyso inaad tahay.
Kudos waxay Perut.org u tahay shaqadeeda cajiibka ah.
Tani waxa ay ku taala Colombia, way ka hooseysaa Venezuela iyo Peru, laakiin waxay leedahay awood weyn oo waddankan waddooyinka waddooyinka miyiga ah runtii waa caqabad. Sidoo kale hadda naqshadeynta xaddidan, oo leh saameyn aad u dhib badan oo dhalaalaya oo keena riyooyinka si loo xiro bogga.
Ugu horreyn dhamaan hambalyada mashruuc aad u fiican. Waxaan ka socdaa Medellin, waxaanan isticmaalayaa xashiishka 11.4.2 ee Nüvi 1390T, khariidadu si fiican ayey u shaqaysaa. Waxaan idiin sheegayaa inaan aad u xiiso u leeyahay bixinta meelo oo aan dhammaystirno waddooyin aan la soo dhicin, sidaas darteed waxaan u qorayaa inaan sheego sida aan u caawin karo khariidada (ugu yaraan Medellín).
Tani waa mid aad u dheer, oo si khaas ah u da'diisu tahay sanad laakiin wuxuu si aad ah u koray si loogu daro khariidadaha farsamada ee Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama iyo Belize. Goobta waxaa lagu dhisay codsi, kaas oo siinaya faaidada isdhexgalka iyo xakameynta dalal kale.
Waxay dhawaan ku dari jireen lakab khafiifin ah mitir kasta oo 50, oo lagu darey tirakoobyada laga yaabo inay ku jiraan:
Wadooyinka 70,771 ee wadooyinka
Xarumaha Adeegga 1,125
1,067 ATM iyo / ama Adeegyada Bangiga
Dugsiyada 928 iyo / ama Jaamacadaha
2369 Meelaha la cuno
Waa mid aad u wanaagsan, oo aad u fiican!
Waxaan kaliya ku rakibay CenRut 24 on Nüvi 265 iyo waxay si fiican u shaqeysaa. Waxaan u isticmaali doonaa miisaan badan marka aan tagno Easter-ka Boquete si aan u soo booqdo saaxiib.
Waxaan ogaaday in, sida "ñapa", sidoo kale waa khariidadaha Nicaragua. Waxaan leenahay qoys ku yaala Managua iyo Chichigalpa, sidaa daraadeed ma sameyn doono.
Ma ogaan karaan sida aan ugu faraxsanahay, iyo sida ay u fududahay qalabku. Haddii aad ubaahan tahay wax ka socdo Ticolandia, i sii ogow.
Waqtiga wanaagsan ee shaqada bilaabay by David, oo hadda maamusha dal kasta Ivo, Carlos iyo Willy.
Post Previous«Previous Sidee loo sameeyaa muujin toos ah oo leh Microsoft Word
Post Next Talooyin dheeraad ah AutoCAD Map, Civil iyo Land Desktop 3DNext »